Dayactir Xuubka Xuubka Bilaa Qaliinka | Badeecada Lagu Dayactiro Xuubka Bikrada Qalliin La'aan - VirginiaCare
VirginiaCare™ Ilaa 2010 ✔ Raritaanka Degdegga ah ee Caalamiga ah ee UPS 4-30 maalmood ka yimid Jarmalka✔ Arag Shahaadada Amniga Guji✔
Soo-saaristii VirginiaCare Products
DHAQANKA HYMENKA QALDAN LA'AAN
“Fadlan si taxaddar leh u akhri dhammaan macluumaadka si aad fursad ugu hesho xallinta dhibaatadaada hadda!"
Badbaadadaada awgeed ...
SOO CELIYO BIRNIMADII Qalliin la'aan
Waad ogtahay inaadan bikro aheyn hadana xaalada waxay kaa dhigeysaa mid aan faraxsaneyn maxaa yeelay ma ogid sida loo xaliyo dhibaatada!?
Hada waad soo ceshan kartaa bikradnimadaada iyadoo aan qalliin lagu sameyn anaga Badeecad lagu dayactiro Xuubka bikrada Qalliin la'aan. Alaabooyinkayaga caanka ah waxaa ka mid ah VirginiaCare Xuubka Maskaxda, VirginiaCare Bikranimo Kiniiniyada Dhiiga, Iyo VirginiaCare Gel Adinta Siilka.
Iyada oo isku dhafan ee ka mid ah Jel adag adkee siilkaaga si dabiici ah oo xoog leh.
Dayactirka xuubka bikrada waxaa lagu horumariyaa iyadoo la adeegsanayo sida ugu wanaagsan ee caafimaad ahaan macquul ahaan loo heli karo. Dhamaanteen VirginiaCare Bikrada Soo Celinta Alaabada kaa caawin maayo oo kaliya inaad xaqiijiso bikranimadaada sidoo kale waxay badbaadin doontaa lacag aad u badan iyo sidoo kale dhibka ay keeneen Hymenoplasty nidaamka caafimaadka. We dammaanad 100% natiijooyin badbaado leh oo lagu qanci karo. Waxaan sidoo kale kaa caawin doonaa inaad Dayactir Xuubka Xuubka Bilaa Qaliinka.
Waxaan aad u qiimeeynaa adiga Privacy markaa waxaan hubinaa inay wax waliba ahaadaan kuwo qarsoodi ah oo magac la'aan ah.
Sida loo isticmaalo VirginiaCare Alaabta?
Kiniinnada Dhiigga Bikradnimada iyo Saliid Adkeynta Saliidda ee Isku -dhafan!
Fiiri Video Hadda
Kalsoonidu waa muhiim ...
100% ISTICMAAL AMAAN AH OO NATIIJO AH
Ma waxaad ka walwalsan tahay isticmaalka? Hadday sidaas tahay, qasab kuguma aha, sababtoo ah codsiga waa sida fudud oo ammaan ah sida ugu macquulsan.
SAAMAYN MA LEH
Maaddaama dhammaan alaabtayada laga sameeyo 100% maaddooyinka dabiiciga ah, halista waxyeellooyinka ayaa hoos loogu dhigay eber waxaana loo tixgelin karaa midda ugu fiican dib -u -soo -nooleynta alaabta caafimaadka siilka.
Waxaad uma baahnid dhakhtarka dumarka taageero maxaa yeelay adiga ayaa badeecada naftaada ku isticmaali kara gabi ahaanba wax dhib ah ma jiraan.
Xaqiiji Bikradnimada Habeenkaaga Arooska!
Ma habeenka arooskaaga oo aadan hubin bikranimadaada oo aad rabto bikradnimadiina soo celi?
VirginaCare ™ leh horumarsan Xirmada Dayactirka Xuubka bikrada alaabtu waxay kaa caawineysaa inaad soo celiso bikranimadaada adigoon u tagin dhakhtarka waxayna u dhaqantaa sidii hab dabiici ah oo lagu adkeynayo siilka.
Xidhmada Dhiigga ee Beenta ah ee Daryeelka Virginia wuxuu ka kooban yahay unug cellulose ah. Qaybahaasi waxay ku milmaan bilaa haraaga kulaylka iyo qoyaanka. Waxay falcelisaa ka dib xiriir gaaban oo lala yeesho qaybaha. Waa inaad gelisaa Kaabsoosha Hymen -ka Macmalka ah faraha si qoto dheer u geliso siilka 1 ilaa 3 saacadood ka hor galmada. Our VirginiaCare Saliid Adkaynta Siilka or Kareemka Xoojinta Siilka Oo Dib U Soo Nooleeya 100 waa isku -dhafka ugu fiican si loo yareeyo gelitaanka siilka.
Dheecaanka dhiiga ee daadanaya ayaa dharka kaliya laga dhaqi karaa sida dhiig dhab ah.
Waa maxay VirginiaCare™ Alaabta?
Xuubka Maskaxda ka samaysan cellulose is-miidaamiya. Tan waxaa dhexda ka buuxsamay budad dhiig oo gaar ah, saamaynta midabkeedu aan laga sooci karin dhiigga dadka. Geli Xuubka Xuubka, faro qoto dheer siilka, 30 daqiiqo - 2 saacadood ka hor galmada. Natiijadu waxay noqon doontaa xaqiiji bikranimadaada
Gel Adinta Siilka | Is qurxin qoto dheer
Soo noolee 100™ waxaa si gaar ah loogu tala galay adkaynta Galitaanka Siilka iyo inbadan. Wixii adkeynta siilka, waxaan kugula talineynaa Dib u soo nooleynta 100. Tani waa a Galin Adkaynta Siilka, kaas oo la mariyo 1 jeer maalin kasta, 1-2 toddobaad kahor xilliga la rabo.
Gel Adinta Siilka
Kaabsoosha Dhiigga ee Virgin
Iyada oo is-milmi Kaabsal Dhiig Bikradnimo waxaad ku xaqiijin kartaa bikradnimada muuqaalka raadadka dhiigga. Geli Kaniiniyada Dhiigga ee Hymen 1-3 saacadood ka hor galmada, fara-gashada siilka.
Dib u soo noolee 100 ™ | Caafimaad u ah Siilkaaga
Kaliya waxaad raadineysaa xal aad dib ugu soo nooleyso oo aad u adkeyso xubintaada taranka? Kadib, adeegso kuwa caalamiga ah ee caanka ah Siilka Gill Gill. Waxaad noqon doontaa la yaabay by ay natiijooyinka.
hadda arag dalab
WAAN KU FADHNAY
IN LA CADEEYO
Runtii waan kula talin karaa dhammaan gabdhaha walaalaha ah. Uma baahnid qalliin alaabooyinka aad ku xallin karto dhibaatadaada ninku ma dareemo! Aad baad u mahadsan tahay VirginiaCare
Nuurcan oo u dhashay dalka Turkiga
Waxaan kuugu mahadcelinayaa qalbigayga oo dhan! Waxaad badbaadisay sharafteyda iyo sidaas mustaqbalkeyga. Waxaan rajeynayaa inaad wali ka caawin karto dumar badan alaabadaada
Mona oo ka timid Sacuudi Carabiya
Runtii dhib badan bay iga badbaadisay. Ma aqaan waxa dhici lahaa haddii sheygaaga la waayo. 1000 jeer waad mahadsantahay
Balu oo reer Indonesia ah
DIB U EEGIDDII BADAN
Maxaan ugu bixin karin dhammaan Lacag -bixinta Keenista?
Waqtigan xaadirka ah waxaan bixinaa kaliya Lacag Gaarsiinta in Hindiya iyo Pakistan maxaa yeelay waxaan halkaas ku haynaa alaabtii. Haddii kale Lacag Bixinta Lacagtu suurtogal ma aha. Waxaan jeclaan lahayn inaan wadammada oo dhan siino COD, laakiin hadda ma jiraan wax suurtogal ah! Waxaan keennaa dhammaan waddamada kale oo la isku halleyn karo 7 maalmood gudahood oo leh maraakiib caymis leh oo la raadraaci karo badhtamaha Jarmalka. 100% Ku aamin ah lacag -bixinta hore. Waxaan leenahay dhammaan xulashooyinka lacag -bixinta ee muhiimka ah: PayPal, Kaarka Amaahda iyo Kaarka Debit oo leh 6 bilood Ilaalinta Iibiyaha, Wareejinta Bangiga, iyo sidoo kale WesternUnion iyo Moneygram.
Sideen u dalbadaa oo u bixiyaa?
asalka ah Virginiacare wax soo saarka
VirginiaCare Hymen Dhiig Kaabsal
VirginiaCare Xirmada Gabdhaha oo Bikran
VirginiaCare Xuubka Maskaxda
Gel adkaynta Siilka Dib u soo noolee 100
Maaskarada Iftiinka Siilka | Bleaching Qarsoon | Bushimaha casaanka ah
ka $ 30
Wax soo saarkii
Shipping lagu xisaabiyo baqshadda.
Waxaad leedahay ikhtiyaarro lacag bixin oo kala duwan:
Kaarka amaahda ama kaarka bangiga haddii PayPal lagu taageero waddankaaga! (Hubi Halkan)
WesternUnion ama MoneyGram Lacagtaada haddii laga taageero waddankaaga!
U wareejinta bangiga caalamiga ah adeegga bangigaaga!
Lacag Bixinta (COD): Waxaa laga heli karaa Indian iyo Pakistan oo keliya. Dhammaan waddamada kale fadlan ha ku dooran habkan lacag bixinta marka la bixinayo!
Qalabkan 'SET', waad wada haysataa Waxyaabaha Bikranimada ee VirginiaCare™ gacanta ku jira oo tijaabin kara ka hor. Marka, waad ogtahay daqiiqada saxda ah, in Hymen-ka Artifishalka ah ama taa bedelkeeda Kaabsoosha Dhiiga Bikranimadu ay tahay xalka kuugu fiican! Iyada oo mar labaad bikrad ah Waxyaabaha Maqaarka ah ee Farshaxanka ah iyo Siil Firming Gel, ma tijaabin kartid oo keliya faa'iidooyinka oo dhan, laakiin halkii, waxaad sidoo kale badbaadin kartaa lacag. Waxaan, haddaba, kugula talineynaa sida ugu iibinta badan ee loo yaqaan 'Virginity Set', si aad si fiican ugu diyaar garowdo habeenka arooska Si loo xaqiijiyo bikradnimadaada la isku halleyn karo oo si sahlan loo isticmaali karo VirginiaCare™ Alaabta. Dalbo Xidhmadaada bikradnimo oo dhameystiran ama alaabteena shaqsiyadeed. 2 Xuubka bikranimada + 2 Kaabsoosha Dhiigga Bikradnimada + 1 Tuubo Siilka Gelinta Adkaynta.
100% natiijo la hubo
Maraakiibta Caalamiga ah ee Bilaashka ah oo ay la socoto UPS 4-7 maalmood
Laga soo raray Jarmalka
Xal fudud, aamin ah oo aan la aqoon
Ma jiro xanuun ama waxyeellooyin soo raaca
Faa'iidooyin badan oo dheeri ah siilka
Si aan kuu siino badbaado oo aad ku kalsoonaato dukaankayaga, waxaanu ku taxnay alaabtayada Amazon! Hadda waxaad haysataa 2 doorasho oo aad ka dalban karto alaabtayada.
Su’aalo iyo Jawaabo isdaba joog ah?!
Waxaad ka heli doontaa waxa ugu muhiimsan Su'aalaha iyo Jawaabaha ku saabsan alaabtayada?!
Tilmaamaha Video-ga ee Caalamiga ah
Fiidiyoow Afkaaga ah hadda daawo
Doqon, Ammaan iyo Degdeg ah oo laga soo raro Jarmalka
Dhoofinta Caalamiga ah 7-30 maalmood oo shaqo oo leh Boostada caalamiga ah oo bilaash ah (lama baari karo dhammaan dalalka!)
raritaanka DHL 1-5 MAALMOOD + 39,90 $ (oo leh dabagal sugan). Waxaan u rarnaa xafiiska kastamka alaabada ee la hagaajiyay, ma jiri doono dhibaato soo dejinta dalkaaga!
Waxaan dalabka ku gaarsiinnaa xirmo qarsoodi ah, iyada oo aan la tixraacin waxa ku jira! Gaadhida degdega ah waxa lagu sii ballansan karaa! Markaad dalbato ka dib waxaad heli doontaa lambarka raadraaca, si aad ula socoto shixnaddaada! Ka dib marka aanu soo rarno, waxa aad kula socon kartaa shixnaddaada lambarkaaga raadraaca gaarka ah ee dhinaca UPS ama DHL.
Gaarsiinta barta UPS
Ma waxaad dooneysaa in xirmadaada la keeno gurigaaga? La fahmi karo! Tani dhib naguma aha innaga, maxaa yeelay waxaan kuu haynaa xal kugu habboon! Kaliya hel a Barta UPS kuu dhow. Waxaad qortaa tan Barta UPS markaad dalbaneysid Dukaanka ama aad siineysid kaayaga Taageerada Customer sida cinwaanka keenista, magacaaga, adiga Lambarka Telefoonka oo aad Cinwaanka emailka.
Raadi Cinwaanka Gaarsiinta Hada
Soo qaado Baakadahaaga DHL EXPRESS!
U dirista Dhibic BILAASH AH DHL Caalamiga ah 1-5 maalmood!
Ma waxaad dooneysaa in xirmadaada xirmada leh ee Boos la geeyo gurigaaga? La fahmi karo! Tani dhib naguma aha innaga, maxaa yeelay waxaan kuu haynaa xal kugu habboon! Kaliya hel a Dhibicda DHL kuu dhow. Waxaad qortaa tan Dhibicda DHL markaad dalbaneysid Dukaanka ama aad siineysid kaayaga Taageerada Customer sida cinwaanka keenista, magacaaga, adiga Lambarka Telefoonka oo aad Cinwaanka emailka. Dabcan, waad haysan kartaa Express Deliveries oo loo diro cinwaan kasta! Tani Adeegga Express kharash dheeraad ah waana awoodaa halkan ku qor.
HELI CINWAANKA DHIMASHADA HADA
Feejignow Bikradaha Bikradnimada ee Been Abuurka ah!
Waxaan ka warqabnaa in dalal badan iibinayaan alaab been abuur ah oo tayo xun.
Markaa had iyo jeer bixi dareenka inta la dalbanayo. Waa inaad ogaataa meesha aad ka dalbanayso.
Shabakado badan ayaa bixiya raqiis halka qaarna ay bixiyaan alaabo qaali ah. Tayada badeecaddu waa muhiim sida haddii dhiig macmal ah falaa ma laha midab macquul ah dhibaato kugu keeni kara. Markaa tayada ayaa ka muhiimsan qiimaha. Dukaankeenna onlaynka ah, waxaan ku talinaynaa oo keliya waxyaabaha asalka ah ka sumadda VirginiaCare™! Dukaankeenna onleenka ah waxaa caddeeyay hay'adda shahaadada caalamiga ah Bog aamin ah!
Waxaan si guul leh u bixinaynaa VirginiaCare™ Alaabta tan iyo 2010 iyo alaabtayadu sidoo kale waa lagu ansixiyay Farmasiiyada gudaha Jarmalka. Waxaan sidoo kale ku soo bandhignay a Documentary TV Yurub ah by Dhaqdhaqaaqayaasha Xuquuqda Haweenka bedel ahaan xal.
VirginiaCareTeam Kooxda Caalamiga ah
Warbixinnada Saxaafadda Caalamka
Kala xiriiri faahfaahin
Lambarka taleefanka: +66638788739